Nezvedu - Shanghai Comi Aroma Co, Ltd.
COMI AROMA ikambani yekugovera zvinhu yakatangwa muShanghai, China muna 2010. Headquarter muShanghai, Fekitori muXuzhou, China. Kubva pakavambwa, isu tave kunyatso kuzivikanwa neiyo High Flint Girazi Zvigadzirwa, zvisinei nhasi, nekugona kune anopfuura makumi maviri nemaviri maficha, isu tinokwanisa kutakura maodha emhando dzose, hukuru, uye mavara pane makuru mavhoriyamu egore rese. Izvi zvinoita kuti tikwanise kushandira maindasitiri akasiyana siyana kusanganisira cosmetic, diffuser, pefiyumu, girazi chubhu, uye mishonga, uye bhodhoro redonhwe. Isu tinovimbisa kuti zvese zvetsika uye zvinhu zvedu zvinogadzirwa kusvika pamhando yepamusoro uye zvinogara zvichiwanikwa muAmber, Green, Flint, uye Cobalt Blue.
Zvikurukuru, COMI AROMA inopa mabhodhoro egirazi, midziyo, uye zvizere seti zvishongedzo (madonhwe emakepisi, mapombi emhute, mapampu ekupfapfaidza, hwema hweFibha matanda, matanda erattan, zvimisa uye makapu). Nemakore angangoita makumi emakore echiitiko muindasitiri yekupakira, isu tinopa zvemhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvekupakira zvigadzirwa zvepasi rose runako uye zvigadzirwa zveganda.
Ese edu epamusorosoro ekugadzira zvigadzirwa, anoenderana nematanho eUS uye ari US FDA akasimbiswa saka isu tinokwanisa kuzadzisa zvido zvevose vari vaviri vekumba uye epasi rese vatengi. Uye zvakare, COMI AROMA yatora unopisa magumo emhepo ekumesa tekinoroji, inotonhora magumo ekupfekedza tekinoroji tekinoroji, uye epamberi silicon-yakafumisa kurapwa tekinoroji. Yedu pachezvangu 100,000+ mativi tsoka yekuchengetera kwatinotengesa anopfuura mamirioni makumi mashanu emayuniti echigadzirwa kuti tione vatengi 'kugutsikana nekukurumidza uye kuchengetedza pfupi pfupi nguva dzekutungamira.
Sezvo COMI AROMA iri kuramba ichikura, tinoedza kuzadzikisa vatengi 'zvese zvinodiwa.
Rwendo Runonakidza rwekutakura, Shanda Rinofara NaCOMI AROMA!
Ndokumbira utibvunze isu nechero kubvunza.
Zvinoreva mucherechedzo pane yakakosha oi ...
Nzira yekusarudza chinzvimbo uye kurongedza ...